တစ်လအတွင်း လူပေါင်း(၈၄၁၀)ဦးအတွက် (၈၄၁)သိန်း လှူဒါန်းနိုင်ခဲ့လို့ ဝမ်းသာနေတဲ့ ဇဏ်ခီ – Suehninsi
သရုပ်ဆောင် ဇဏ်ခီနဲ့ ဒါရိုက်တာ ခရစ္စတီးနားခီတို့ ဦးဆောင်တဲ့ FCPN ပရဟိတအဖွဲ့ဟာ ဇွန်လ(၈) ရက်နေ့မှာ တစ်လ ပြည့်ခဲ့ပြီလို့ ဆိုပါတယ်။ ဒီ တစ်လ အတွင်းမှာ ငွေကျပ်(၈၄၁) သိန်း လှူဒါန်းပြီးခဲ့ပြီဖြစ်တာကြောင့် ဝမ်းသာပီတိဖြစ်ရတယ်လို့ ဇဏ်ခီက ဆိုပါတယ်။ ” ဒီနေ့ဟာ FCPN ရဲ့ တစ်လပြည့်ပါ။ Yes! One month!! သိန်း(၅၀) နဲ့စခဲ့တဲ့ idea လေးကနေ အားလုံးပူးပေါင်းပါဝင်ပြီး အလှူကြီးတစ်ခုဖြစ်လာတာ အားလုံးအတွက် ကျွန်တော်ဝမ်းမြောက်ဂုဏ်ယူမိပါတယ်။ (၈၄၁)သိန်း ကနေ သိန်း(၁၀၀၀) ထိရောက်သွားနိုင်မလားလို့ စိတ်ကူးမိတယ်။ လိုအပ်နေတဲ့သူတွေအများကြီးတွေ့လာတော့
ဆက်တိုက်လှူပေးချင်နေမိတယ်။ အလှူငွေတွေလည်းဆက်လက် လက်ခံနေပါတယ်။ တစ်ခါလှူတာအားမရလို့ အခေါက်ခေါက်အခါခါလှူချင်ရင်လည်း လှူနိုင်ပါတယ်နော် လို့ပြောရင်း ယုံယုံကြည်ကြည်နဲ့လှူနေတဲ့အလှူရှင်များအားလုံးကို ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်လို့ပြောပါရစေ။ ယုံကြည်မှုမရှိရင် စည်းလုံးမှုမရှိနိုင်ပါဘူး။ စည်းလုံးမှုမရှိရင် ဘာအလုပ်မှမဖြစ်မြောက်နိုင်ပါဘူး။ I’m so proud of this program #fcpn and I’m so proud of all of you!!!” ဆိုပြီးတော့ ဇွန်လ ၈ ရက်နေ့ ည ၉နာရီကျော်က သူ့ရဲ့ ဖေ့စ်ဘွတ်ပေ့ခ်ျမှာ
ရေးသားထားတာ ဖြစ်ပါတယ်။ FCPN Facebook Page မှာလည်း အလှူတွေ လုပ်ခဲ့တဲ့ တစ်လ အတွင်းမှာ လူဦးရေ (၈၄၁၀) ဦးကို လှူဒါန်းပြီးခဲ့ပြီဖြစ်တယ်လို့ ရေးသားထားတာ တွေ့ရပါတယ်။ FCPN Program ကိုတော့ ၂၀၂၀ ခုနှစ် မေလ အတွင်းမှာပဲ စတင်တည်ထောင်ခဲ့တာ တွေ့ရပါတယ်။ ဒီအစီအစဉ် ကနေ တဆင့် တကယ်လိုအပ်မှုရှိနေတဲ့ နေရာဒေသတွေမှာ လိုအပ်နေတဲ့ သူတွေကို အဖွဲ့သားတွေကိုယ်တိုင်က သွားရောက် လှူဒါန်းလျှက်ရှိတယ်လို့ ဇဏ်ခီက FCPN Page ကနေတဆင့် ဗီဒီယိုဖိုင်လေးနဲ့
ပြောပြထားတာ တွေ့ရပါတယ်။ အလှူငွေများ ဝိုင်းဝန်းကောက်ခံခြင်း နဲ့ အလှူငွေ စာရင်းများကိုလည်း FCPN Facebook Page ကနေ အမြဲတမ်း တင်ပြပေးနေတယ်လို့လည်း သူက ဆိုပါတယ်။ ဇဏ်ခီနဲ့ ခရစ္စတီးနားခီတို့နဲ့ အတူ FCPN ပရဟိတအဖွဲ့သားတွေဟာ ရန်ကုန်တိုင်း အတွင်းရှိ စားနပ်ရိက္ခာ နဲ့ ငွေကြေးထောက်ပံ့မှုလိုအပ်တဲ့ နေရာဒေသတွေတင်မက နယ်မြို့လေးတွေမှာ အမှန်တကယ် လိုအပ်မှုရှိနေတဲ့ နေရာဒေသတွေ အထိ လှူဒါန်းလျှက်ရှိတယ်လို့ ဇဏ်ခီက ဆိုပါတယ်။သူတို့ ဇနီးမောင်နှံဟာ COVID-19 ကာလမှာ
စားဝတ်နေရေး အခက်အခဲဖြစ်နေတဲ့ အိမ်ထောင်စုတွေအတွက် ဧပြီလ အတွင်းက We Love Yangon ကနေတဆင့် စားနပ်ရိက္ခာတွေ လှူဒါန်းခဲ့တာကိုလည်း တွေ့ရပါတယ်။ FCPN ပရဟိတအဖွဲ့သားတွေနဲ့ အတူ ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျ အလှူအတန်းတွေ လုပ်နေတဲ့ သရုပ်ဆောင် ဒါရိုက်တာဇဏ်ခီကိုတော့ ‘ ဥပါယ်တံမျဉ်’ ဆိုတဲ့ ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီးရဲ့ အဓိက သရုပ်ဆောင် တစ်ယောက်အနေနဲ့ ပရိသတ်တွေ စတင်သိရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီနောက် ‘ မုဒြာရဲ့ ခေါ်သံ’ ဆိုတဲ့ ရုပ်ရှင်ကားကြီးမှာ လည်း ပရိသတ်တွေက အားပေးခဲ့ကြပါသေးတယ်။ တတိယမြောက် ရုပ်ရှင်ကားကြီး အနေနဲ့ ‘ Now & Ever’ ရုပ်ရှင်ကားကြီးမှာလည်း ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ခဲ့တာဖြစ်သလို ပရိသတ်အားပေးမှုတွေလည်း ပိုလို့ရရှိခဲ့ပြန်ပါသေးတယ်။
သရုပျဆောငျ ဇဏျခီနဲ့ ဒါရိုကျတာ ခရစ်စတီးနားခီတို့ ဦးဆောငျတဲ့ FCPN ပရဟိတအဖှဲ့ဟာ ဇှနျလ(၈) ရကျနမှေ့ာ တဈလ ပွညျ့ခဲ့ပွီလို့ ဆိုပါတယျ။ ဒီ တဈလ အတှငျးမှာ ငှကေပျြ(၈၄၁) သိနျး လှူဒါနျးပွီးခဲ့ပွီဖွဈတာကွောငျ့ ဝမျးသာပီတိဖွဈရတယျလို့ ဇဏျခီက ဆိုပါတယျ။ ” ဒီနဟေ့ာ FCPN ရဲ့ တဈလပွညျ့ပါ။ Yes! One month!! သိနျး(၅၀) နဲ့စခဲ့တဲ့ idea လေးကနေ အားလုံးပူးပေါငျးပါဝငျပွီး အလှူကွီးတဈခုဖွဈလာတာ အားလုံးအတှကျ ကြှနျတျောဝမျးမွောကျဂုဏျယူမိပါတယျ။ (၈၄၁)သိနျး ကနေ သိနျး(၁၀၀၀) ထိရောကျသှားနိုငျမလားလို့ စိတျကူးမိတယျ။ လိုအပျနတေဲ့သူတှအေမြားကွီးတှလေ့ာတော့
ဆကျတိုကျလှူပေးခငျြနမေိတယျ။ အလှူငှတှေလေညျးဆကျလကျ လကျခံနပေါတယျ။ တဈခါလှူတာအားမရလို့ အခေါကျခေါကျအခါခါလှူခငျြရငျလညျး လှူနိုငျပါတယျနျော လို့ပွောရငျး ယုံယုံကွညျကွညျနဲ့လှူနတေဲ့အလှူရှငျမြားအားလုံးကို ကြေးဇူးအမြားကွီးတငျပါတယျလို့ပွောပါရစေ။ ယုံကွညျမှုမရှိရငျ စညျးလုံးမှုမရှိနိုငျပါဘူး။ စညျးလုံးမှုမရှိရငျ ဘာအလုပျမှမဖွဈမွောကျနိုငျပါဘူး။ I’m so proud of this program #fcpn and I’m so proud of all of you!!!” ဆိုပွီးတော့ ဇှနျလ ၈ ရကျနေ့ ည ၉နာရီကြျောက သူ့ရဲ့ ဖစျေ့ဘှတျပခြေျ့မှာ
ရေးသားထားတာ ဖွဈပါတယျ။ FCPN Facebook Page မှာလညျး အလှူတှေ လုပျခဲ့တဲ့ တဈလ အတှငျးမှာ လူဦးရေ (၈၄၁၀) ဦးကို လှူဒါနျးပွီးခဲ့ပွီဖွဈတယျလို့ ရေးသားထားတာ တှရေ့ပါတယျ။ FCPN Program ကိုတော့ ၂၀၂၀ ခုနှဈ မလေ အတှငျးမှာပဲ စတငျတညျထောငျခဲ့တာ တှရေ့ပါတယျ။ ဒီအစီအစဉျ ကနေ တဆငျ့ တကယျလိုအပျမှုရှိနတေဲ့ နရောဒသေတှမှော လိုအပျနတေဲ့ သူတှကေို အဖှဲ့သားတှကေိုယျတိုငျက သှားရောကျ လှူဒါနျးလြှကျရှိတယျလို့ ဇဏျခီက FCPN Page ကနတေဆငျ့ ဗီဒီယိုဖိုငျလေးနဲ့
ပွောပွထားတာ တှရေ့ပါတယျ။ အလှူငှမြေား ဝိုငျးဝနျးကောကျခံခွငျး နဲ့ အလှူငှေ စာရငျးမြားကိုလညျး FCPN Facebook Page ကနေ အမွဲတမျး တငျပွပေးနတေယျလို့လညျး သူက ဆိုပါတယျ။ ဇဏျခီနဲ့ ခရစ်စတီးနားခီတို့နဲ့ အတူ FCPN ပရဟိတအဖှဲ့သားတှဟော ရနျကုနျတိုငျး အတှငျးရှိ စားနပျရိက်ခာ နဲ့ ငှကွေေးထောကျပံ့မှုလိုအပျတဲ့ နရောဒသေတှတေငျမက နယျမွို့လေးတှမှော အမှနျတကယျ လိုအပျမှုရှိနတေဲ့ နရောဒသေတှေ အထိ လှူဒါနျးလြှကျရှိတယျလို့ ဇဏျခီက ဆိုပါတယျ။သူတို့ ဇနီးမောငျနှံဟာ COVID-19 ကာလမှာ
စားဝတျနရေေး အခကျအခဲဖွဈနတေဲ့ အိမျထောငျစုတှအေတှကျ ဧပွီလ အတှငျးက We Love Yangon ကနတေဆငျ့ စားနပျရိက်ခာတှေ လှူဒါနျးခဲ့တာကိုလညျး တှရေ့ပါတယျ။ FCPN ပရဟိတအဖှဲ့သားတှနေဲ့ အတူ ကိုယျတိုငျကိုယျကြ အလှူအတနျးတှေ လုပျနတေဲ့ သရုပျဆောငျ ဒါရိုကျတာဇဏျခီကိုတော့ ‘ ဥပါယျတံမဉျြ’ ဆိုတဲ့ ရုပျရှငျဇာတျကားကွီးရဲ့ အဓိက သရုပျဆောငျ တဈယောကျအနနေဲ့ ပရိသတျတှေ စတငျသိရှိခဲ့တာဖွဈပါတယျ။ အဲဒီနောကျ ‘ မုဒွာရဲ့ ချေါသံ’ ဆိုတဲ့ ရုပျရှငျကားကွီးမှာ လညျး ပရိသတျတှကေ အားပေးခဲ့ကွပါသေးတယျ။ တတိယမွောကျ ရုပျရှငျကားကွီး အနနေဲ့ ‘ Now & Ever’ ရုပျရှငျကားကွီးမှာလညျး ပါဝငျသရုပျဆောငျခဲ့တာဖွဈသလို ပရိသတျအားပေးမှုတှလေညျး ပိုလို့ရရှိခဲ့ပွနျပါသေးတယျ။